Soomaaliya oo Siyaaradii dibada heer ka gaartay, tii gudaha oo cadaw dhex jiifo
Tuesday, 12 March 2019 01:42
Mudadaas 27 sanadoodka ah ee dalkeenu baylahda ahaa,waxaa cadawgeenii inagu dhexbeertay dad midabkeena leh, afkeena ku hadalaya, soomaali inala ah,laakiin xanbaarsan oo fulinaya hadafyada cadawga soomaaliyeed, kuwaasoo dhaafsaday jago iyo mansab iyo lacag uun. waa wax ka jira aduunyada oo dhan qofka dalkiisa jaajuusa ee u adeega dawladaha shisheeye ee cadawga u ah dalkiisa. sidaa si lamid ah dad ayaa kujira hay adaha kala duwan ee dawlada soomaaliyeed,haday tahay baarlamaan, haday tahay aqalka sare, haday tahay xukuumada, haday tahay madaxtooyada, ciidamada iyo hay adkastoo ah dawli ama ururada bulshada rayidka ah. intabadana ururada bulshada rayidka ah iyo saxaafada iyagaa toos u hogaamiya dadkaa cadawgu dhigtay oo samaystay.
Ururkasta iyo hay adkasta oo bulshada rayidka ah, shisheeyaa fangareeya sameeyayna, saxaafada loogumagacdaray saaxafada xortaha ah sirdoon dalal cadaw inoo ah ayaa iska leh oo maal gashaday. saxaafadaasi way kamadaxbanaan yihiin dawlada soomaaliyeed iyo u adeega danaha dalka soomaaliya.
Waxaa jira rag dawlada soomaaliyeed kasoo qabtay heer madaxweyne, rag ah xildhibaano iyo rag xil kasoo qabtay dalkeena oo ah siyaasiyiin, waxay isu ekaysiiyaan in ay mucaarad yihiin, waxay iska dhigaan mucaarad. laakiin dhab ahaan waa niman u adeegaya danaha dawlado shisheeye,waxayna cod hoose iyo mid dheerba ku sheegan arimaha lidiga ku ah geedi socodka soomaaliya oo lugaheeda ku istaagta. Tusaale ahaan marka dawlada soomaaliya gar iyo gardaraba ay is qabtaan wadamada dunida dal kamid ah, sida Ethiopia iyo Emaraat iyo sucuudiga iyo iiraan iyo dalkasta, dalalkaa siyaasiyiintoodu waxay meel kawada istaagaan qadiyada dalkooda oo xoojiyaan dawladooda shacabkana tusaan dawladnimada iyo wadaniyada.
Nimankan caadada kayeeshay in ay horistaagaan in soomaaliya dawladi ka dhalato,oo qabyaalad iyo kicin shacab iyo soomaalida oo lakala fogeeyo kashaqaynaya, ee lasafahan marwalba cadawga qarankeena iyo dhulkeena duulanka ku ah maha mucaarad waa cadaw ka xun oo ka fog cadawgeena muuqda.
Dawladan hada dadaalaysa waxay ka gaabisay hawlaha uugu waa weyn marka dal dib loo dhisayo oo uu burburo sideena oo kale,oo ah in cadawga gudaha ee inagu dhex jira lasugo. Niman sugin cadawga gudaha ee aan kor ku xusay waanin geedo sare waabaya weeye. kuwa u shaqeeya cadawga xarigmaha dilweeye.waxaa hubaal ah kuwa sheegta siyaasiyiinta ee mucaaradka iska dhigayaa iyo kuwan afka duuban in halmeel laga wada xukumo, waxaana ka dhexeeye wada shaqan buuxda hadaad u fiirsataan oo daba gashaan. nimankaa afka duuban maxaa miis wada fadhiisiyay!! mucaaradka?
Nabadsugida soomaaliyeed masugto cadawga gudaha!mana daba gasho kuwa siyaasada kula jira faraha kuna xiran dawladaha shisheeye iyo kuwa ka agdhaw labadaba,taasi iyagay utahay waji gabax waa in dagdag wax looga qabtaa. shacabka soomaaliyeed waa lagu dhexjiraa waana la jahawareerinayaa iyadoo qabiil loogu soo gabanaayo guud ahaan soomaaliya dad yar oo kooban ayaa dalkeena ku dhex jira waa in lasugaa dadkaas la garaanaayo.
Qabiil waa maxay? looma baahna maadaama aan nahay isku isir isku diin isku af isku dad iyo isku dal anagoo soomaali ah ayaan rabnaa in dalkeena aan ilaashano cadawga gudaha ka difaacano iyo kan dibadaba. Qofkastoo soomaaliyeed xilbaa saaran oo kasaaran dalkiisa.Dawlad leh awood ay ku illaaliso xudeeda mahaysto iyo dawladnimaan mucaaradi meel ma wada gasho, maanta soomaaliya siday tahay marka dhab ahaan aad eegto looma baahna mucaarad sidii dal dhisan oo amaankiisu sugan yahay oo kale.
More in this category: « Dr Maxamed-Rashiid Sh Xasan:Geeriyeey Xajiyaay Fogeeyaay One egg a day increases risk of stroke death by 17% »